ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ရှော့ခ်တိုက်ငါးဖမ်းခြင်းကိစ္စ လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေး
ထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၃၄,၀၀၀ ကျော်ရှိ
“ရတနာပုံ” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ iflix မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ
ကမ္ဘာ့ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်း အမြင့်မားဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်လာတဲ့ ဟောင်ကောင်
လာဘ်စားမှုစွပ်စွဲချက်ကြောင့် ထိုင်းနယ်စပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ် ၂ ခုပိတ်
အကျင့်ပျက် ညံ့ဖျင်း အရာရှိများကို NLD အရေးယူမည်
အမေရိကန်ကို ဒုံးပျံစမ်းသပ်မှု လက်ဆောင်သစ်များ ပေးဦးမယ့် မြောက်ကိုရီးယား
ရွှေတိဂုံစေတီ အလှူဘဏ္ဍာငွေများ ငွေတိုက်စာချုပ် ဝယ်ယူထားဟုဆို
By ဝေယံအောင်7July 2017
မြန်မာ့ဗလခရီး ကာယဗလဖခင်နှင့် မြန်မာ့လူသန်ဇော်ဝိတ်ကြီး စာအုပ်မျက်နှာဖုံး
စာရေးသူ . – ကျော်မြင့်လွင်
စာအုပ်အမည် – မြန်မာ့ဗလခရီး ကာယဗလဖခင်နှင့် မြန်မာ့လူသန်ဇော်ဝိတ်ကြီး
ဆရာကျော်မြင့်လွင်က မြန်မာ့ကာယဗလဖခင်ကြီးဦးရှိန်နဲ့မြန်မာ့လူသန်ကြီးဦးဇော်ဝိတ်တို့ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုပြုစုနိုင်ဖို့ ၇ နှစ်စီ အချိန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် အမျိုးသား ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး ကာယဗလလုပ်ငန်းတွေနဲ့ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို အုံးအုံးကြွက်ကြွက်ဖြစ်အောင် ဦးဆောင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တဲ့ ကာယဗ လ ဦးရှိန်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ စာပေ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေကို အခန်းပေါင်း ၃၆ ခန်းနဲ့ဖတ်ရှုရ မှာဖြစ်သလို အိန္ဒိယအင်ပါယာ အလေးမချန်ပီယံဘွဲ့ကိုဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်အတွက် ပြည်သူလူထုကို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ လူသန်ကြီးဦးဇော်ဝိတ်ရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် အမျိုးသားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ အားကစားနယ်ပယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို အခန်းပေါင်း ၁၇ ခန်းနဲ့အတူ ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကူးချိုချို က တန်ဖိုး ၇၀၀ ကျပ်နဲ့ဖြန့်ချိထားပါတယ်။
မြန်မာတွေ မညံ့ပါဘူး စာအုပ်မျက်နှာဖုံး
စာရေးသူ – ဟန်စိုး
စာအုပ်အမည် – မြန်မာတွေ မညံ့ပါဘူး
နိုင်ငံတကာမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွားတွေအကြောင်း စုစည်းတင်ပြထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နာနိုသိပ္ပံပညာ ရှင် ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာစောဝေလှ၊ နာဆာမှ သိပ္ပံပညာရှင် ပဒေသာတင် ၊ ကင်ဆာဆရာဝန် ဒေါက်တာစိုးမောင် လေး၊ အင်တာနက် စာကြည့်တိုက်ပိုင်ရှင် Mr.Lee Pit Teong ၊ ဖောင်ဖျက်ပြီး အလုပ် လုပ်တတ်သူ ဖိလစ်မောင်၊ အောင် မြင်ခြင်းဆိုသည်မှာ (သို့မဟုတ်)သန်းဝေအောင်၊ အိမ်မက်များကို မရပ်တန့် သူ (သို့မဟုတ်) စတီဗင်ဦး ၊ အမေရိကန် ရောက် ပထမဆုံးချင်းအမျိုးသမီးဆရာဝန်အိုင်ရင်းနုနတ်ခ်၊ (I.E.EE) အင်ဂျင်နီယာ ဒေါက်တာမိုးဇော်ဝင်း၊ မြန်မာအမျိုးသမီး ဘတ်စကက်ဘောကစားသမား Elima Tay ၊ ဟောလီးဝုဒ်စတား အေဒရီယံဇော်၊ ဂျစ်ပစီဒီဇိုင်နာ ဇာနည်ထူးထူး၊ ဘေ့စ် ဘောကစားသမား ဇော်ဇော်ဦး၊ အိမ်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဖြင့်အောင်မြင်သူ အဲလ်ဘတ်အောင်အောင်၊ ညာဝင်း ဘောလုံး သမား Kler Heh ၊ ဂျပန်ခေါက်ဆွဲ (လမယ်န်)နဲ့ ကိုထိန်လင်း၊ ကိုမျိုးထွန်း၊ အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ရှင် ကိုခင်မောင်လတ်၊ Name Card တခု အရင်းပြုတဲ့ ကိုသီဟထက် စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တွေအကြောင်းတွေကို ဖတ်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဟန်စိုးက အောင်မြင်မှုကို တည်ဆောက်လိုတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အားဆေးတခုဖြစ်စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးသားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပဉ္စဂံစာအုပ်တိုက်က တန်ဖိုး ၂၀၀၀ ကျပ်နဲ့ဖြန့်ချိထားပါတယ်။
ရန်ကုန် ပါနိုရားမား စာအုပ်မျက်နှာဖုံး
စာရေးသူ – ညွန့်ဝင်းလေး
စာအုပ်အမည် – ရန်ကုန် ပါနိုရားမား
အမျိုးအစား . – မြို့ပြယဉ်ကျေးမှု
ရန်ကုန်ကိုချစ်ပေမယ့်လည်း အားမလိုအားမရဖြစ်လို့၊ ကြော့ကြော့ရှင်းရှင်းဖြစ်စေချင်လို့ ရေးဖြစ်သွားတဲ့ ဆရာညွန့်ဝင်း လေးရဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြ အခင်းအကျင်း စာစုတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ ရန်ကုန်မြို့ပြ မြင်ကွင်းကျယ်၊ ရန်ကုန်ကဗျာနှင့် ရသစာတမ်း၊ ရန်ကုန်ဗိသုကာ ရသဆောင်းပါးစတဲ့ ကဏ္ဍာသုံးရပ် ပါဝင်ပြီး ဒီကဏ္ဍတွေအောက်မှာ စာစုပေါင်း ၂၂ ပုဒ်ပါဝင် ပါတယ်။
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာလို့ နာမည်ပေးထားပေမယ့် တန်ဖိုးမနည်းတဲ့အိမ်ရာတွေအကြောင်း၊ ကွန်ဒိုယောင်ဆောင်ထားတဲ့ အိမ်ရာ တိုက်ခန်းတွေအကြောင်း၊ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ အသက်ဝင်တဲ့စက်မှုဇုန်တွေအကြောင်း၊ မြို့ပြမဆန်တဲ့ မြို့သစ်တွေ အကြောင်း၊ အကုန်အကျများသလောက် အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းတဲ့ ကုန်းဆင်းကုန်းတက် ကားလမ်းမများအကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မျက်စိပသာဒကို အိုးမည်းသုတ်နေတဲ့ ဖြူနီကြောင်ကျား အထပ်မနိမ့်မမြင့် တိုက်များ အကြောင်း၊ အမှည့်လွန် ဟောင်းနွမ်းတိုက်များအကြောင်းကို၊ ညစ်ထေးနေတဲ့ သားငါးဈေးများအကြောင်းကို ဖတ်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဉ္စဂံစာအုပ်တိုက်က တန်ဖိုး ၃၀၀၀ ကျပ်နဲ့ဖြန့်ချိထားပါတယ်။
စာရေးသူ . – သိန်းဖေမြင့်
စာအုပ်အမည် – မြစ်ဖျားဧရာရောင်စုံဖြာ
အမျိုးအစား – ခရီးသွားစာပေ
ဆရာကြီးသိန်းဖေမြင့်ရဲ့ စာဆိုတော်လရာသီ ကချင်ပြည်နယ်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံဆောင်းပါးတွေကို စုစည်းထုတ် ေ၀ ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ ဂျက်လေယာဉ်၊ လှပစည်ကားသောမြစ်ကြီးနား၊ လူမျိုးပေါင်းစုံနှင့် ရောယှက်နေထိုင်သောမြို့နယ်၊ ပုံနှိပ် တိုက် နှင့် ရက်ကန်းကျောင်း၊ စာဆိုတော်နေ့အကြိုဟောပြောပွဲ၊ အာလမ်းရွာသို့၊ နန်းသီတာစာဆို တော်နေ့၊ မိုးကောင်းသို့ မသွားမီ၊ ကျောက်စိမ်းနယ်မြေ၏မုခ်ဦး၊ တစ်နှစ်လျှင် သုံးလသာလည်သောစက်၊ ခေတ်မီသော နမ္မတီး၊ ဗန်းမော်မှ ငဆောင်ချမ်း၊ ရွှေဂူ သို့၊ တပ်ပေါင်းစုစာချုပ်စိတ် ဓာတ်ဘယ်လဲ၊ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေး သမိုင်းဇာတ်ခုံ၊ ချယ်ရီပွင့်နေပြီဖြစ် သော မိုး မောက်မြို့နယ်၊ စာပေဝါသနာရှင်ပေါသော ဗန်းမော်၊ မန်စီသို့၊ ပူတာအိုသို့ အသွား၊ မူလန်ရှီဒီးသို့၊ ပါတီက တည်ခင်းသော ဧည့်ခံပွဲ၊ ပြည်ထောင်စုပန်းချီဆရာ၊ မချမ်းဘောသို့၊ ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ဖျားတွင် အစောဆုံးတိုးဝင်ခဲ့သော အင်္ဂလိပ် များ၊ အသက်ရာကျော်အဘိုးကြီးနှင့်အဖွားကြီး၊ ပူတာအိုမှ ခင်သန်းနု၊ ရဝမ်မင်္ဂလာဆောင်၊ ကူမင်းပြန် ဂျီဒဲ၊ တြိဂံ ထောင့်စွန်း ကို ဖြတ်ကျော်၍၊ ကချင်မျိုးနွယ်အုပ်စု ခြောက်ခုဆိုသည်မှာ၊ နန်းသီတာမှ မထွက်ခွာမီ၊ ကုံကုမံနှင့် ဇာတိပ္ဖိုလ်သီး၊ နှုတ်ဆက် ထမင်းစားပွဲ၊ ပွဲဝင်သော အုန်းမှုတ်တယော ၊ အနှစ်ချုပ်ဆိုသော် ၊ အုန်းမှုန်း တယောဆရာကြီးနှင့် ခွဲခြင်း စတဲ့ စာစုတွေကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ပိုင်မင်းစာပေက တန်ဖိုး ၂၅၀၀ ကျပ်နဲ့ဖြန့်ချိထားပါတယ်။
ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ် မျက်နှာဖုံး
စာရေးသူ – ဝင်းမောင်
စာအုပ်အမည် – ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
အမျိုးအစား . – စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်
ကဗျာဆရာ ဝင်းမောင်ရဲ့ကဗျာရှည်၂ပုဒ် ပြီးတဲ့နောက်မှာ ထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ ကဗျာစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာပေါင်း ၉၇ ပုဒ်ပါဝင်ပြီး ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာ ဇော်ဇော်အောင်ရဲ့အမှာစာပါဝင်ပါတယ်။ ဆရာဇော်ဇော်အောင်က စာအုပ်အမှာ စာအဖြစ် ၁၉၉၆ကတည်းက ရေးပေးခဲ့တာလို့လည်း ကဗျာဆရာ့အမှာစာအရ သိရပါတယ်။မဂ္ဂဇင်း ဂျာနယ် အမှတ်တရစာအုပ်တွေမှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ ကဗျာအများစုဖြစ်သလို ပုံနှိပ်ခြင်း မပြုရသေးတဲ့ ကဗျာ အသစ်များ လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ ကျေးဇူးတရား၊ငါ့လွယ်အိတ်၊ အားလုံးသော ပန်းပွင့်များ၊ရယ်ရသော ဟာသ၊တောင်ကျရေ၊ ပုထုဇဉ်များ၊ အသံကုန်ဟစ်၍၊ ငါတွေ့၊ ကောလင်းဝီလဆင်သို့၊ ခွေးတို့အတွက်ကဗျာ၊ အနုံဉာတ၊ ဒီနေ့စားပွဲ၊ ရယ်သံများ ကြားစေသတည်း၊ ၁၉၈၆၊ လရောင်အောက်မှာ၊ ကဖေး၊ သတိရခြင်းကဗျာ၊ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်၊ မိမိမသိနိုင်သော မိမိမွေးနေ့ အ ကြောင်း၊ မိုးသီချင်း၊ငိုတဲ့နေ့အကြောင်း၊ ငါတို့ရဲ့ပျော်စရာတွေ၊ အိတ်ဆောင် အဘိဓာန် စသဖြင့် ကဗျာကောင်း များစွာပါဝင် ပါတယ်။
စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်က တန်ဖိုး ၂၃၀၀ ကျပ်နဲ့ဖြန့်ချိထားပါတယ်။